Daawo Xildhibaan Cabdiraxman Tanyaale oo sheegtay inuu isagu yahay gudoomiyaha saxda ah ee maanta baarlamanku doortey isagoo ka noqday hambalyadii uu maanta hambalyeeyay baashe faarax | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo Xildhibaan Cabdiraxman Tanyaale oo sheegtay inuu isagu yahay gudoomiyaha saxda ah ee maanta baarlamanku doortey isagoo ka noqday hambalyadii uu maanta hambalyeeyay baashe faarax
Hargaysa (SDWO.com): Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Talyanle, ayaa sheegay in doorashadii maanta ee xildhibaanadda golaha Wakiiladu ay guddoomiyenimadda ugu doorteen Baasha Maxamed Faarax, uu isagu ku guulaystay.
Waxaanu ku dooday xildhibaan Talyanle, in tiradii 39-ka ahayd ee maanta lagu sheegay in Baashe Maxamed Faarax uu helay, in ay khalad ahayd oo wax la is-daba mariyay, isla markaana uu Baashe lahaa codka 38-ka ahaa ee markii tiradda xildhibaanadda gacanta u taagay lagu sheegay in Talyanle uu lahaa.
C/raxmaan Talyanle, oo caawa warbaahinta kula hadlay gurigiisa magaaladda Hargaysa ayaa tilmaamay in markii codayntu dhamaatay uu isaga laftiisu u hambalyeeyay Baashe Maxamed Faarax, hase yeeshee ay hadda soo baxday xaqiiqadii oo uu isagu ku guulaystay guddoomiyenimadda golaha Wakiiladda.
Waxaanu yidhi “Anigoo ah xildhibaan C/raxmaan Maxamed Talyanle, waxaan halkan ka cadaynayaa ummadda Somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan golaha Wakiiladda, maanta doorashadii iyo codkii la qaaday ee aan saaxiibkay Baashe Maxamed Cadde ku tahniyadeeyay xaqiiqdii ayaa soo baxday, laga bilaabo imika oo aan idinla hadlayo guddoomiyaha golaha Wakiiladda ee la doortay waa aniga”.
Waxa kale oo uu intaas ku daray xildhibaan Talyanle, in hambalyadii uu u hambalyeeyay Baashe in uu daacad ka ahaa oo uu gudanayay waajibaadku sida uu yahay, laakiin markii wax dib loo baadhay in arrintu ay is-bedeshay.
“Xaqiiqdeediina waan hayaa, 39-ka xildhibaan ee codeeyay ciday u codeeyeen waa C/raxmaan Maxamed Talyanle. Sidaa darteed af-hayeenka golaha Wakiiladda Somaliland waa naiga.
Waxaanan u sheegayaa saaxiibkay Baashe Maxamed Faarax oo aan tahniyadeeyay, anigoo lilaahi iyo daacadnimo waajibkaa ku gudanayay in arrintii is-bedeshay oo isaga maanta looga baahan yahay xaqiiqda jirta iyo codkii badnaa (majority-ga) ahaa halka uu maray aqballo, naguna tahniyadeeyo”ayuu yidhi C/raxmaan Talyanle.
Geesta kale kadib markii doorashadii maanta ee Baashe halka cod kaga guulaystay C/raxmaan Talyanle ay dhamaatay, ayaa waxa jiray in fadhigaasi uu hadheeyay buuq iyo muran xoogan oo u dhexeeyay xildhibaanadda golaha Wakiiladu ee ka soo kala jeedda xisbiyadda Kulmiye iyo Waddani.
Waxaana jirtay hadalo ay ku dhawaaqayeen xildhibaanadda xisbiga Waddani oo ahaa ku doodayay in wax is-daba marin lagu sameeyay hanaankii tirinta codadka xildhibaanadda gacanta u taagay C/raxmaan Talyanle, isla markaana tiradda 39-ka ahayd ay u codeeyeen Talyanle.
Hase yeeshee xoghayaha guud ee golaha Wakiiladda C/rasaaq Siciid Ayaanle uu si khaldan ugu yeedhiyay Cali Yuusuf Axmed oo fadhiga maanta shir-gudoominayay, iyadoo xildhibaanadda Waddani ee arrintaasi ka biyo-diidsanaa ay codsanayeen in dib loo baadho Kamaradihii laga duubayay fadhiga si loo cadeeyo tiradda codadka.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqa xildhibaan C/raxmaan Talyale, ee ah in uu isagu ku guulaystay guddoomiyenimadda golaha Wakiiladda ee markii hore ugu hambalyeeyay Baashe Maxamed Faarax, ayaa la saadaalinayaa in ay abuuri doonto muran cusub iyo khilaaf ka dhex bilaabma golaha Wakiiladda gaar ahaana xildhibaanadda kala taageersan Kulmiye iyo Waddani.